News - SUNTOP Ngosiputa obere ihe nkenke eriri igwe na Germany
Ejiri igwe eji eme ihe eji eme ka igwe ihe n 'uzo anyi di nma na Germany. The ahịa tumadi nyere metal nhazi ọrụ na-achọ nkenke 0.08mm. Na mbido, ọ họọrọ ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa, mgbe ha tụlechara nhazi igwe, izi ezi, ọrụ aka na ọrụ nke igwe ahụ, a na-ahọrọ SUNTOP LASER n'ikpeazụ. N'ebe a, anyị chọrọ ka azụmahịa ya ka mma ma ka mma. SUNTOP ga-arụsi ọrụ ike ma ọ gaghị eweda gị ala.
Dabere na data kachasị ọhụrụ nke General Administration of Customs wepụtara, mbubata na mbupụ azụmahịa nke mba China ruru puku ijeri 2,84 na October, mmụba nke 4.6% karịa otu oge n'afọ gara aga (otu dị n'okpuru). Nke a bụkwa ezigbo mmụba nke mbubata na mbupụ azụmaahịa mba ofesi maka ọnwa ise gara aga kemgbe June. N'ime ha, mbupụ bụ yuan 1.62, ịrị elu nke 7.6%; mbubata bụ yuan trillion 1.22, mmụba nke 0.9%; ahia ahia bu 401.75 ijeri yuan, mmụba nke 34.9%. Nyocha a na-egosi na ihe ndị dị mma n'ụlọ na mba ndị ọzọ ka na-agbakọ, a na-atụ anya na azụmaahịa mba ofesi ga-anọgide na-eto eto na-aga n'ihu n'afọ niile.
Na ngụkọta, n’ime ọnwa iri mbụ n’afọ a, ngụkọta ọnụ ahịa China na-ebubata ma na-ebupụ bụ ngwa ahịa ruru ijeri dolla 25,95, ịrị elu nke 1.1%. N'ime ha, mbupụ bụ yuan 14,33 trillion, mmụba nke 2,4%; bubata bụ yuan trillion 11,62, ihe ruru 0,5%; ahia ahia bu 2,71 trillion yuan, mmụba nke 16.9%.
Ọ bụ ezie na ọ na-enwe ọganihu na-aga n'ihu na usoro, usoro azụmaahịa China ka enwegoro nke ọma, yana mbubata mbubata mbubata na mbubata na-abawanye na nkezi na-abawanye. N'ime ọnwa iri mbụ, mbubata na mbupụ izugbe nke China ruru ijeri trillion 15,6, mmụba nke 2.8%, na-atụle 60.1% nke uru ahịa mba ofesi China, mmụba nke 1 pasent karịa otu oge n'afọ gara aga. N'ime ha, mbupụ ruru yuan 8.51 trillion, mmụba nke 4.8%; Mbubata batara 7,09 trillion yuan, mmụba nke 0,5%. N'ime otu oge ahụ, mbubata na mbupụ nke nhazi nhazi ruru 6.09 trillion yuan, gbadaa 6.2%.
Nyocha a na-egosi na mgbake ngwa ngwa nke mbupụ azụmaahịa izugbe na-enye nkwado maka njikarịcha nke usoro azụmaahịa niile. Wang Han, onye ọka mmụta akụnụba nke Societe Generale Securities, kwuru na ebe ọ bụ na Machị, na usoro mgbake mbupụ China, ike mgbake na-esite na mbupụ azụmaahịa izugbe. Kwa afọ na-ebupụ ahịa ahịa izugbe na 16.8% site na ala dị ala - 4.5% na Machị ruo Ọktọba; site na Jenụwarị ruo Ọktọba, ọnụọgụ ọnụọgụ nke azụmaahịa izugbe nwetaghachila na 2.8%, na-ede ihe dịka 60% nke mbupụ China, mmụba nke ihe dịka 1% ma e jiri ya tụnyere otu oge n'afọ gara aga. N'otu oge ahụ, ahịa nhazi mbubata ọnụ bụ - 7.5% kwa afọ, na azụmaahịa nhazi nhazi bụ - 14.7% kwa afọ. N'ime usoro mbupụ mbupụ mgbe ọrịa ahụ gachara, azụmaahịa izugbe nwere ọnụ ahịa dị elu ga-agbake nke ọma na usoro azụmaahịa China ga-akawanye mma.
Pipe Fiber Laser cutter, Tube Laser cutter, Eriri Laser tube tingcha Machine, China Fiber Laser tingcha Machine, Eriri Laser tingcha Machine, Eriri Laser Pipe tingcha Machine,